Filoha Hery Rajaonarimampianina : Nandray ny Kardinaly Anders Arborelius
02/08/2018 admintriatra 0
Eto an-toerana amin’izao fotoana izao ny Kardinalin’i Suède, Son Eminence Anders Arborelius. Tonga nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny tenany, omaly, notronin’ny Mgr Marie Fabien Raharilamboniaina, Evekan’ny diosezin’i …Tohiny
Festival Somaroho 2018 : Fety ho an’ny mponin’i Nosy-Be
Nanomboka tamin’ny fomba ôfisialy omaly ny Festival Somaroho 2018, andiany fahadimy. Hetsika karakarain’ny Wawa Group isan-taona ao amin’ny tampon-tanànan’i Nosy-Be. Toa ny mahazatra sy isan-taona, ny « carnaval » na sy filaharambe ataon’ireo mpandray anjara, …Tohiny
Seces : Hampiato ny fitokonana
Hampitsahatra ny fitokonany ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo (seces) miaraka amin’ny mpandraharaha eny amin’ny oniversite sy ny mpianatra, taorian’ny fihaonana natao tamin’ny Filoham-pirenena ny alatsinainy lasa teo. Hitsahatra ao anatin’ny …Tohiny
Solika : Niakatra 50 Ariary
Nahitana fisondrotana 50 ariary indray ny vidin’ ny solika ny omaly, ary tazana izany teny amin’ ireo toby mpaninjara solika. Noho izany dia lasa 4 100 Ariary ny iray litatra amin’ ny solika,raha toa ka …Tohiny